IAmazon ihlaziya usetyenziso lwayo ukuyenza ikhawuleze | IPhone iindaba
IAmazon ihlaziya usetyenziso lwayo ukuyenza ngokukhawuleza
Izicelo zihlala ziguquka, kodwa ngamanye amaxesha sijonga ngasemva kwaye sizibuze ukuba bekuyimfuneko na ukuncama uzinzo kunye nobushushu ngokutshintshisa ukusebenza okutsha. Bacinge ngokufanayo kwisebe lophuhliso laseAmazon, kwaye kunjalo Banike ii-tweaks ezincinci kwisicelo esiya kuthi sivumele abasebenzisi beAmazon ukuba benze ukuthenga ngokukhawuleza kwaye kube lula. Olu lolunye lwezicelo ezininzi ezibeka iibhetri, zilibale ngokusebenza ngaphandle kwesiqendwana, kwaye sigxile ekusebenziseni, sicinga ukuba nge-iOS 10.
Asinakukunceda kodwa sikhumbule ukuba akukho ngaphezulu kwenyanga esele i-iOS 10 ukuba ifike ngokusemthethweni kwizixhobo zethu, ngakumbi kwi-iPhone yethu. Ezi ziindaba ngokweAmazon:
Yintoni eNtsha kuHlelo 7.1.0
Sivelise ubume obutsha beMenyu eNkulu (≡) ye-iPhone enika amaqela ukungena kumacandelo ekulula ukuwafumana. Xa uvula iapp okokuqala ngqa, ungatyibilika umda wasekhohlo ukuvula imenyu. Sikwenze icandelo elitsha lezicwangciso elibandakanya ukhetho lokuphuma, Izaziso kunye nokutshintsha ilizwe. Ukubhalisa kunye nokuGcina kunye nokuKhangela kweMbali yecandelo kunokufumaneka kwiAkhawunti yam kunye neengcebiso kwiphepha lasekhaya. Siza kuqhubeka sisebenza ukwenza ukuhamba kweapp kube lula kwaye kube mnandi.
Le nguqulo iyahambelana ne-WKWebView ye-Apple, ecutha iingxaki ekusebenzeni kwi-iPhone kunye ne-iPad, ke uyakonwabela amava agudileyo kwaye azinzile.
Inyani yile yokuba isicelo silula, nokanye kwimeko kaWhatsApp, ngeentsuku ezidlulileyo naye wathembisa ukuba izingxoxo ziya kusebenza ngokukhawuleza, kodwa ukuthumela ifoto kuye kwaba yinto enkulu kakhulu. Njengamaxesha onke, iAmazon sisicelo sasimahla, esiguqulelwe kwiilwimi ezininzi kwaye saqwalaselwa jikelele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » IAmazon ihlaziya usetyenziso lwayo ukuyenza ngokukhawuleza
I-Activator ngoku ixhasa ukuqhekeka kwejele kwi-iOS 9.2-9.33